Nhau - Hole opener, inozivikanwawo sehomwe saw saw kana hole saw, inoreva kune yakasarudzika denderedzwa saha yekugadzira machira akatenderera mumabhizimusi emazuva ano kana mainjiniya.
Hole opener, inozivikanwawo sehomba yemasaha kana gomba saha, inoreva kune yakasarudzika denderedzwa saha yekugadzira machira akatenderera mumabhizimusi emazuva ano kana mainjiniya.
Hole opener, inozivikanwawo sehomba yemasaha kana gomba saha, inoreva kune yakasarudzika denderedzwa saha yekugadzira machira akatenderera mumabhizimusi emazuva ano kana mainjiniya. Zviri nyore kushanda, zviri nyore kutakura, zvakachengeteka uye zvinoshandiswa zvakanyanya. Zviri nyore kucheka rakatenderera gomba, garo rekona, hutatu gomba, yakatwasuka tambo uye rakakombama pane chero rakakombama pamusoro pemhangura, simbi, simbi isina chinhu, plexiglass nemamwe mahwendefa kana yaiswa pane yakajairika yemagetsi chibooreso.
Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzedenderedzwa, vabati vanemapango akasiyana uye maratidziro. Panguva imwecheteyo, maererano nekudzika kwemakomba, iwo akapatsanurwa kuita akajairwa mhando uye yakadzika mutoro mhando. Iwo akaiswa pamagetsi emagetsi chibooreso, kukanganisa drill, rocker kuboora uye mamwe emagetsi maturusi.
Kune maviri marudzi akajairwa:yakatarwa dhayamita uye inoshanduka dhayamita (ndege mhando). Iyo inoshanduka dhayamita gomba kuvhura inowanzo shandiswa mukati nekunze kushongedza.
Yakagadziriswa dhayamita gomba kuvhura, pane zvakajairika mhando, inokanganisa mhando, yemvura-yakatonhorera mhando, iyo yemvura-yakatonhorera mhando inowanzo shandiswa pakuvhura kwemadziro, ine yakakwira kushanda uye kwakanaka kuvhura.
Zvinoenderana nechikamu chechinyorwa:bi-metal hole opener / bi-metal hole saw, yakaiswa cement carbide gomba saha, dhayamondi gomba saha. Zvishandiso zvakasiyana zvinoshandiswa kucheka zvinhu zvakasiyana. Iyo inonyanya kushandiswa ndeye bimetallic saw. Cemented carbide inokurudzirwa kune yakaoma simbi zvinhu, uye madhaimani inokurudzirwa girazi, kabhoni fiber, ceramics uye zvimwe zvisina kusimba zvinhu.
Izvo zvinowaniswa zveyakavhura gomba zvinonyanya kusanganisira:mubato wekutsigira, chitubu, chibooreso, nezvimwewo mubato wekutsigira ndewezvikamu zvese. Iyo gomba rakaona rakasiyana gomba dhayamita yakagadzirirwa maviri maratidziro ekutsigira mubato. Dhayamita iri pakati pegumi nemana nemakumi matatu nematatu mm imwe yakatarwa, uye dhayamita iri rakakura kudarika makumi matatu nemasere mm.
Izvo zvishongedzo zvegomba rakaona zvakanyanya zvinosanganisira:mubato wekutsigira, chitubu, chibooreso, nezvimwewo mubato wekutsigira ndewezvikamu zvese. Iko kuvhura kwegomba rine rakasiyana gomba dhayamita rine maviri marongero erutsigiro mubato. Iyo dhayamita yepakati pakati pegumi nemana nemakumi matatu nemaviri mm chirevo chimwe, uye dhayamita rakakura kupfuura makumi matatu nemasere mm chirevo chimwe.
Yekumhanyisa simbi mhando yechinhu simbi simbi ine hurefu hwakaomarara, yakasimba yekupfeka kuramba uye kupisa kwakanyanya kupisa. Yekumhanyisa simbi inowanzoshandiswa kugadzira yakaoma mutete kumucheto uye kukanganisa inomiririra simbi yekucheka maturusi, pamwe neakanyanya tembiricha inotakura uye kutonhora extrusion kufa nekuda kwayo kwakanaka maitiro maitiro uye musanganiswa wakanaka wesimba uye kuomarara.
Yekumhanyisa simbi tapi rudzi rwekuvhura chishandiso chakagadzirwa nesimbi-inomhanyisa simbi, iyo inonyanya kushandiswa kuvhura maburi pamahwendefa esimbi kana pombi. Inogona zvakare kushandiswa panzvimbo yepakati yekumisikidza gomba risati ravhurika, uyezve riine bi-simbi gomba rakaona kuvhura iro rinodiwa dhayamita.
Kune akawanda marudzi ealloy hole openers. Ikozvino musika wakakamurwa kuita (zvakajairika) yakakosha yakatetepa simbi jira, (inoshanda mhando) yakasvinudzwa yakavhurika yakatetepa simbi isina simbi. (wepakati giredhi) yakasarudzika yakavhurika simbi isina simbi. (yepamusoro giredhi mhando) yakashama yakavhurika simbi isina simbi (simbi yeplate ukobvu inogona kusvika kupfuura 2cm).
Kechipiri: bimetallic hole opener inoshandiswa kuvhura jira simbi, huni uye ndiro yepurasitiki.
Yetatu, kushandiswa kweyekumhanyisa simbi simbi pombi gomba kuvhura uye alloy tapper zvakafanana. Points: akajairwa, epakati giredhi, yakakwira giredhi, yakazara kukuya, maindasitiri giredhi.
Chekupedzisira, alloy tapper inokodzera simbi simbi uye yekumhanyisa simbi yekukanda muchina inokodzera simbi pombi.
6542 simbi yekumhanyisa
Zvimiro: yakaderera vanadium zvemukati (1%) uye yakakwira cobalt zvemukati (8%). Cobalt naDu vanogona kuita kuti makomponi emakabhoni anyungudike zvakanyanya mumatrix panguva yekudzima uye kupisa, uye shandisa yakasimba matrix kuomarara kwekuvandudza kupfeka kuramba.
Kuoma: iyi mhando yesimbi yekumhanyisa ine hukukutu hwakanaka, kupisa kwekushisa, kupfeka kuramba uye kugona kugona. Iko kuomarara kwekupisa kurapwa kunogona kusvika 67-70hrc, asi dzimwe nzira dzakakosha dzekurapa dzinoshandiswa kuwana kuoma kwe67-68hrc, iyo inovandudza kuita kwekucheka (kunyanya kucheka kwepakati) uye kunovandudza kuomarara kwekukanganisa.
Kushanda: cobalt yekumhanyisa simbi inogona kuitwa mumhando dzakasiyana siyana dzekucheka maturusi, ayo anogona kushandiswa kucheka zvakaoma kumushini zvigadzirwa. Nekuda kwekuita kwayo kwakanaka kwekukuya, inogona kugadzirwa kuve yakaoma yekucheka maturusi, ayo anoshandiswa zvakanyanya pasi. Nekudaro, nekuda kwekushomeka kwecobalt zviwanikwa muChina, mutengo wecobalt simbi-inomhanyisa simbi yakakwira kwazvo, ingangoita ka5-8 nguva yeiyo yakajairika simbi-inomhanya simbi.
Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza: kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, hapana kusvibiswa.